iPhone 13: fanombohana, vidiny ary ny fiparitahany rehetra | Vaovao IPhone
iPhone 13: fanombohana, vidiny ary ny fampahalalana rehetra momba azy
Izahay dia eo amin'ny dingana farany alohan'ny fampisehoana sy ny fanombohana ny iPhone 13 manaraka, ary tianay ny hamintina anao izay rehetra fantatsika hatreto momba ny finday avo lenta an'ny Apple ao anaty lahatsoratra iray izay havaozinay miaraka amin'ireo vaovao miseho mandritra ireo herinandro ho avy.
1 Daty famoahana IPhone 13
2 Modely IPhone 13 sy 13 Pro Max
3 Famolavolana ny iPhone 13 vaovao
4 Loko an'ny iPhone 13 vaovao
5 Ireo toetra izay heverina ho voamarina
5.4 Ny batterie sy ny fiampangana
5.5 Fomba hafa
6 Ohatrinona ny vidin'ny iPhone 13?
Daty famoahana IPhone 13
Taorian'ny fanemorana ny fandefasana ny iPhone tamin'ny taon-dasa, noho ny areti-mifindra COVID-19, amin'ity taona ity dia azo tsinjovina fa ny fampisehoana azy sy ny fandefasana azy manaraka dia hitranga aloha kokoa. Marina fa niova ny toe-javatra ankehitriny fa misy olana maro amin'ny famatsiana microchips, saingy misy kosa ny tsaho miantoka fa TSMC dia manao ny laharam-pahamehana ho an'ny orinasa mpamokatra singa, ary raha ampiantsika amin'izany fa ny sakana amin'ny Huawei dia mampihena ny varotra betsaka, dia mety tsy mijaly noho ny tsy fahampian'ny singa ny iPhone.
Miaraka amin'izany rehetra izany, ny daty famoahana ny iPhone 13 amin'ireo maodeliny rehetra afaka nandroso tamin'ny volana septambra. Ny tsaho dia manondro 17 na 24 septambra ho daty azo inoana indrindra fandefasana. Raha voamarina ny daty voalohany, dia hatao ny talata 7 septambra ny fampisehoana azy (Efa fantatray ny fomba itiavan'ny Apple ny talata amin'ny hetsika ataon'izy ireo) amin'ny fanombohan'ny famandrihana ny zoma 10 septambra ho avy izao, ary ny varotra mivantana any amin'ny magazay ara-batana sy amin'ny Internet amin'ny 17 septambra. Ireo daty ireo, araka ny voalazantsika, dia azo ahemotra herinandro raha ny 24 septambra ny varotra mivantana.
Modely IPhone 13 sy 13 Pro Max
Isan-taona dia misy ny adihevitra momba ny anaran'ny iPhone vaovao. Io no hany fitaovana Apple izay mahazo isa amin'ny anarany, izay manondro mazava tsara ilay maodely resahintsika. iPad Pro, iPad Air, iPad, MacBook, iMac ... Apple dia tsy manaraka an'io mason-tsivana io ihany rehefa manome anarana ny sisa amin'ny katalaogin'ny vokatra, ka nandritra ny taona vitsivitsy dia re fa ny iPhone dia afaka mandao ilay isa ary antsoina hoe iPhone fotsiny. Saingy toa tsy ho toy izany ny amin'ity taona ity, ary hitohy amin'ny isa amin'ny tapany farany amin'ny anarany izany.
Ny fanontaniana mipetraka dia izao Hantsoina hoe iPhone 12s na iPhone 13 ve izy io? Ny iPhone 11 dia narahin'ny iPhone 12, fa tsy ny faha-11, angamba satria tsy nampatsiahy ny zava-nitranga tamin'io daty nanjavona io tany Etazonia, na noho ny antony fotsiny satria ity modely vaovao ity dia nitondra fanovana endrika nanasarahana azy tsy mitovy amin'ilay teo alohany. Ity iPhone 13 vaovao ity dia antenaina fa tsy hitondra fanovana lehibe raha oharina amin'ny iPhone 12, fa tsaho milaza fa tsy hatao hoe iPhone 12s fa iPhone 13.
Inona avy ireo maodely ho hita amin'ity iPhone vaovao ity? Manaiky izany ny ankamaroan'ny mpandinika tsy hisy fiovana raha oharina amin'ny taranaka ankehitriny ary noho izany dia hanana ny mpandimby azy ny iPhone 12 amin'ity taona ity:
iPhone 13 mini: miaraka amin'ny efijery 5,4-inch, mpandimby ny iPhone 12 mini.
iPhone 13: miaraka amin'ny efijery 6,1-inch, mpandimby ny iPhone 12.
iPhone 13 Pro: miaraka amin'ny efijery 6,1-inch, mpandimby ny iPhone 12 Pro.
iPhone 13 Pro Max: miaraka amin'ny efijery 6,7-inch, mpandimby ny iPhone 12 Pro Max.
Toa tsy dia hisy fiantraikany amin'ny fitohizany ao anatin'ny faritra iPhone amin'ity taona ity ny varotra ratsy amin'ny iPhone 12 Mini raha mitandrina ny tsaho farany isika, na dia mbola misy aza ireo manome toky fa tsy havaozina amin'ity taona ity. Tsy isalasalana fa ny maodely izay tratra indrindra amin'ny tsimatra amin'ny faritra manontolo. Mikasika ny iPhone SE, tsy hisy fanavaozana amin'ity 2021 ity, ary hiandry ny 2022 isika vao hahita ilay maodely vaovao omen'i Apple antsika.
Famolavolana ny iPhone 13 vaovao
Apple dia hanampy fanovana vitsivitsy amin'ny famolavolana iPhones vaovao. Hanohy ny lamosin'ny vera izy ireo, zavatra iray ilaina hiasa amin'ny wireless wireless, ary ny sisiny fisaka, toy ny iPhone 12. Eo aloha dia hanohy ny efijery mibahana ny aloha rehetra izahay, ary ny "notch" izay nampiavaka ny iPhone hatramin'ny nanombohan'ny iPhone X na dia mihena aza ny habeny misaotra ny fametrahana mpandahateny vaovao. Ao amin'ireo modely vaovao ireo ny mpandahateny dia tsy hibodo ny afovoan-tany Fa kosa, ho hita eo amin'ny sisin'ny ambony amin'ny efijery izy io, hamela toerana bebe kokoa ho an'ny fakantsary anoloana sy ny singa rehetra amin'ny FaceID hapetraka, ka azo ahena ny sakany.
Ny refin'ny iPhone vaovao dia hitovy amin'ny maodely misy azy ankehitriny, ny hateviny ihany no hampitomboina kely, 0,26 mm eo ho eo, zavatra izay tsy ho tsikaritray rehefa eny am-pelatanantsika izy io, fa afaka manome olana vitsivitsy amintsika amin'ny fonon'ny maodely ankehitriny. Na ahoana na ahoana, ny tranga misy amin'ny iPhone 12 dia tsy handeha amin'ny iPhone 13 vaovao, satria ho lehibe kokoa ny modely fakantsary.
Eto amin'ity ampahan'ny iPhone ity indrindra no ahitanao ireo fanovana famolavolana vitsivitsy amin'ity taona ity, satria ho lehibe kokoa ny tanjona ary hisongadina bebe kokoa noho ny amin'ny taranaka ankehitriny, noho izany ny modely, araka ny efa noresahintsika teo aloha, dia lehibe kokoa. Ny tsaho sasany dia miresaka momba ny fametrahana diagonaly vaovao an'ireo lantiro ao amin'ny iPhone 12 sy 12 mini, izay hitohy hanana roa ihany. Ny mety hisian'ny tanjona 2/3 (miankina amin'ny maodely) dia arovan'ny kristaly safira tokana, fa tsy manao azy manokana toy ny amin'ny maodely ankehitriny, dia niresaka ihany koa.
Tsy te-tsy hiresaka momba ny mpampifandray ny iPhone 13 vaovao isika, satria na dia toa tsy azo inoana aza izany dia nisy tsaho vitsivitsy momba ny mety ho fampiasa maodely iray farafaharatsiny. Ny rafitra MagSafe navoaka tamin'ny taon-dasa dia tsy vitan'ny fanefana ny fitaovana fotsiny fa amin'ny fandefasana data. Araka ny voalazantsika dia toa zavatra mety ho tonga tsy ho ela izany fa tsy ho amin'ity taona ity.
Loko an'ny iPhone 13 vaovao
Ny lokon'ilay iPhone vaovao dia miteraka tsaho foana manodidina azy ireo, na dia tsy voamarina aza izy ireo amin'ny ankamaroan'ny tranga. Azo antoka fa manana ny fotony ny honohono, Apple dia nanao fitsapana maro tamin'ny loko isan-karazany nandritra ny fotoana fampandrosoana ny iPhones vaovao, mamela loko na roa vaovao amin'ny farany, farafaharatsiny. Amin'izao fotoana izao ny iPhone 12 dia hita fotsy, mainty, manga, maintso, volomparasy ary mena, raha ny iPhone 12 Pro kosa dia eo amin'ny sary, volafotsy, volamena ary manga.
Miaraka amin'ireo maodely iPhone vaovao dia hanohy hanana ny ankamaroan'io sokajy loko io isika, na dia hosoloina aza ny sasany. Noho izany ao amin'ny grafika iPhone 13 Pro dia hanome lalana ny mainty mainty, que dia ho mainty be noho ny maodely ankehitriny, izay volondavenona kokoa. Eo koa ny resaka loko varahina, volomboasary kokoa noho ny volamena ankehitriny. Ary raha ny maodely "tsy Pro" dia misy loko mavokely azo ampidirina, nefa toa mampidi-doza loatra.
Ireo toetra izay heverina ho voamarina
Ireo efijery dia hitazona ny vahaolana mitovy amin'ny ankehitriny, ary koa ny habe mitovy aminy. Ny andrasana dia izay, amin'ity taona ity eny, tonga ny taham-pahavitrihana 120Hz, na dia voafetra amin'ny modely Pro aza, samy 6.1 sy 6.7 santimetatra. Ny efijery dia ho an'ny karazana LTPO, izay hampihena ny fanjifana angovo 15 ka hatramin'ny 20%. Io karazana haitao io koa dia ahafahana mampihena ny isan'ny singa ao ambanin'ny efijery, mba hisy toerana bebe kokoa ho an'ireo singa hafa (bateria, ohatra).
Tao anatin'izay andro vitsivitsy izay dia misy resaka ihany koa fampiasa amin'ny efijery vaovao, "Aseho mandrakariva" na efijery hatrany, toy ny Apple Watch avy amin'ny Series 5. Ny fihenan'ny fanjifana angovo an'ny efijery LTPO dia afaka manonitra ny fanjifana avo kokoa tokony hananan'ity fampiasa ity, izay ahafahanao mahita hatrany ny fampahalalana amin'ny efijery miaraka amin'ny iPhone mihidy.
Ny iPhone 13 dia hitazona ny fanekena ny endrika ho toy ny rafitra fiarovana amin'ny fividianana, fandoavam-bola amin'ny Apple Pay ary mamoha ny fitaovana. Tao anatin'izay andro vitsy lasa izay, dia nisy ny tsaho milaza izany Ny iPhone 13 dia afaka nanangana rafitra famantaran-tarehy vaovao fa hiasa na dia amin'ny saron-tava aza, izay ho fanentanana lehibe hanavao ny iPhone amin'ity taona ity.
Saika nolavina fa ny iPhone vaovao dia manana rafitra fanekena ny dian-tànana, na Touch ID, na eo aza ny zava-misy efa afaka nanandrana ny rafitra tamin'ny prototypes iPhone 13 sasany. Toa tsy dia azo inoana loatra fa ity iPhone vaovao ity dia ahitana an'io endri-javatra io, ary mila miandry farafahakeliny herintaona isika, raha ampidirina amin'ny farany.
Io dia ho iray amin'ireo fizarana izay hitondra vaovao bebe kokoa, miaraka amin'ny fanatsarana manerana ny faritra, na dia manan-danja kokoa ao amin'ny 13 Pro sy Pro Max aza. Ireo maodely ireo dia hahitana solomaso 6 vaovao zoro zoro zoro, raha oharina amin'ireo singa 5 an'ny ankehitriny. Hisy fiatraikany amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ireo sary azo tamin'ity solomaso ity, izay hanampy ihany koa ny fampidirana ny autofocus, tsy eo izao, ary ny aperture lehibe kokoa an'ny f / 1.8 (f / 2.4 izao).
ny ho lehibe kokoa ny tanjona, noho izany ny fitomboan'ny haben'ny modely an'ny fakantsary. Io dia hahafahan'ny fidirana hazavana lehibe kokoa hahazo kalitao tsara kokoa amin'ny sary tsy misy jiro kely. Ho fanampin'izay, ny haben'ny sensor dia ho lehibe kokoa ihany koa, ary haka hazavana bebe kokoa. Ny zava-drehetra dia toa manondro fa maniry ny hanatsara ny sary nalaina tamin'ny hazavana ambany ny Apple tamin'ity taona ity.
Ireo fivoarana farany ireo dia tsy mazava amintsika raha misy amin'ny maodely iPhone rehetra izy ireo, na raha ho modely Pro ihany no hitehirizana azy ireo. fanatsarana ny fanamafisana ny sary, hampidirina ao amin'ny sensor, miala amin'ny fanamafisana ny optika, mahazo sary sy horonan-tsary tsaratsara kokoa. Inona no toa azo antoka fa izany ny sensor LiDAR dia ho an'ny iPhone 13 Pro ihany.
Hisy fakan-tsary roa vaovao, iray sary, maka sary avy any an-danitra. Mety hanazava izany fanatsarana be dia be no nifantoka tamin'ny sary maivana sy somary malalaka. Ny maody vaovao hafa dia horonantsary, miaraka amin'ny blur effet tsy mitovy amin'ny maody fakana sary, izay azonao atao koa ny mamerina aorian'ny fanamboarana ny halalin'ny saha.
Ny batterie sy ny fiampangana
Ny iPhone 13 vaovao dia afaka mandefa teknolojia vaovao antsoina hoe "bateria malemy", izay ahafahanao mamorona bateria misy sosona vitsy kokoa, izay mamonjy toerana anatiny ao amin'ny iPhone. Amin'izany fomba izany, ny bateria dia mety hitombo nefa tsy mila mampitombo ny haben'ny iPhone. Ny iPhone 13 Pro Max no mety hahazo fitomboana betsaka amin'ny bateria, mahatratra 4,352mAh, raha ny ambiny amin'ireo maodely kosa dia mahita fiakarana kely kokoa.
Toa tsy hisy fiovana eo amin'ny rafitra famandrihana, na tariby na tariby. Apple dia nampiditra ny rafitra MagSafe tamin'ny iPhone 12, izay mahatratra hatramin'ny 15W ny herinaratra, ary amin'ny alàlan'ny tariby dia 20W no fatra ambony indrindra. Afa-tsy ny tsy ampoizina dia hijanona tsy miova ireo angona ireo ao amin'ny iPhone 13 vaovao. Tsy antenaina ihany koa izy ireo fa hanana fiampangana miverina, na farafaharatsiny tsy fiampangana miverina mamela azy ireo hampiasaina ho toy ny tobim-pitsarana Qi mahazatra. Efa fantatsika fa ny iPhone 12 dia manana famerenana amin'ny laoniny saingy voafetra amin'ny famerenana ny bateria MagSafe vaovao izay vao natombok'i Apple.
Heverina fa ny iPhone 13 vaovao dia hampiditra ny processeur A15 Bionic, ny mpandimby ny A14 Bionic izay tafiditra ao amin'ny iPhone 12. Ity taranaka vaovao ity dia mety ahitana "system on a chip" (SoC) vaovao izay tsy hanatsara ny fanatanterahana ilay fitaovana, mitifitra ny heriny araka ny fahitany ny taranaka mifandimby, saingy hampitombo ny fahaizany koa amin'ny fampihenana ny fanjifana angovo.
Azo antoka fa hijanona tsy miova ny fitehirizana, manomboka amin'ny 64GB y miaraka amin'ny ambony indrindra 512GB. Nisy ny tsaho momba ny fampiakarana ny haben'ny boot ho 128GB, izay mety ho vaovao tsara fa tsy lojika, saingy toa tsy dia azo inoana loatra izany. Ny mety ahafahan'ny iPhone 13 miakatra amin'ny tahiry 1TB amin'ny maodely Pro dia toa lavitra ihany koa.
Modely iPhone 13 rehetra hanana fifandraisana 5G, ary hampiasa ny modem Qualcomm X60. Ny fampiharana an'io karazana tamba-jotra io dia mbola somary marginaly amin'ny ankamaroan'ny firenena, na dia antenaina aza fa ny 2022 dia midika ho fiandohan'ny fanitarana ankapobeny. Mikasika ny fifandraisana WiFi, dia hifanaraka amin'ireo tambajotra WiFi 6E vaovao, izay manampy ny tarika 6GHz ary manatsara ny WiFi 6, mbola eo am-piandohana am-piandohana.
Ohatrinona ny vidin'ny iPhone 13?
Tsy misy fiovana antenaina antenaina, noho izany ny iPhone 13 dia mbola nitovy ihany ny vidiny noho ny taranaka ankehitriny.
iPhone 13 mini avy amin'ny € 809
iPhone 13 avy amin'ny € 909
iPhone 13 Pro manomboka amin'ny € 1159
iPhone 13 Pro Max avy amin'ny € 1259
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fantson'ny IPhone » iPhone 13 » iPhone 13: fanombohana, vidiny ary ny fampahalalana rehetra momba azy
Danco dia hoy izy:
Andao, raha manana ny iPhone 12 ianao, dia tsy mendrika azy ny 13, saika ilay finday ihany
Mamaly an'i Danco
Eny, toy ny isan-taona, tsy misy miova amin'ny 11 ka hatramin'ny 12 koa, napetrak'izy ireo andriamby ny lamosiny
Eny, raha manana 11 sy 10 ianao dia mitovy ihany koa, tsy manavao na inona na inona intsony izy ireo.
Eny, tsy mendrika ny mividy ny iPhone 13. Hanampy ny batterie ho +4300 mha izany. Ny iPhone Fold sy ny iPhone 14 dia ho zavatra hafa. Ankoatr'izay, ny orinasa lehibe dia mampihatra chips 4n ankehitriny, amin'ny taona 2023 dia manana chip gauge 3 izahay, izay mahaliana!
Ireo batterie dia hampiasa grafite heveriko hoy izy ireo? Haharitra efa ho herinandro ny bateria.
Jetpack Joyride + misy izao ao amin'ny Apple Arcade manamafy fa lany hevitra i Apple